ကျွန်မကို ကြင်နာချင်မှ ကြင်နာပါ သို့သော် ကြင်နာချင်ယောင်တော့မဆောင်နဲ့ – Shinyoon
ကျွန်မကို ကြင်နာချင်မှ ကြင်နာပါ သို့သော် ကြင်နာချင်ယောင်တော့မဆောင်နဲ့
ကျွန်မကို ကြင်နာချင်မှ ကြင်နာပါ သို့သော် ကြင်နာချင်ယောင်တော့မဆောင်နဲ့ အပေါ်ယံတွေကို ကျွန်မ မုန်းတယ် ။ ဟန်ဆောင်ပြီး အချစ်ခံရတာလဲ လူမှားပြီး ဓားနဲ့ထိုးခံရသလိုပဲ သေတတ်တာမျိုးပဲလေ အသက်တွေ မသေတောင် ဘဝတွေ သေချင် သေသွားတတ်တာမျိုးပေါ့ ။
အရာရာကို စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ်ပြီး ခံစားတတ်တဲ့ အားနည်းချက်ကြီးက ပြင်မရတဲ့အထဲ လွယ်လွယ်လေး ယုံကြည်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့်လဲ ခက်ပါတယ် ။ ကိုယ်နဲ့လိုက်နှိုင်းပြီး ကိုယ့်လိုပဲလို့ ထင်တတ်တဲ့ အတွေးတွေ ခုထိ မပျောက်သေးတာလဲ ပါတယ်လေ ။
အခုခေတ်က ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လမ်းကြုံပြောသွားတဲ့လူတွေပဲ များတယ်လေ ရရင်လဲ အမြတ်ပေါ့ မရပြန်တော့လဲ အရှုံးမရှိပါဘူးလေ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ရမလားဆိုပြီး သွေးတိုးစမ်းချင်ကြတဲ့ လူတွေပဲ များပါတယ် အစစ်အမှန်ဆိုတာ ထင်တာထက် ပိုရှားလွန်းလာခဲ့သလို ဘေးနားမှာ အတုအယောင်တွေချည်းပဲ ပိုပေါများလွန်းလာခဲ့တယ် ။
သနားပြီး ချစ်တာမျိုး ကျွန်မ မနှစ်သက်ဘူး ကျွန်မ မှာ ခြေနှစ်ဖက် လက်နှစ်ဖက် အကောင်းပတိအတိုင်းလဲ ရှိတယ် ရည်မှန်းချက်တွေ အိပ်မက်တွေလဲ အပြည့်ရှိတယ် ကျွန်မဟာ အသနားခံ လူသားမဟုတ်သလို သနားစရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးအဖြစ် မျက်လုံးမြင်ပြီး ကြင်နာသလိုလို သနားသလိုလို အကြည့်မျိုးတွေကို ကျွန်မ ရွံလဲ ရွံတယ် မုန်းလဲ မုန်းတယ် သနားပြီးမှ ချစ်တယ်ဆိုရင် မချစ်ပါနဲ့
ပြီးတော့ . . . ငါးမရ ရေချိုးပြန်တဲ့အချစ်မျိုးတွေလဲ မနှစ်မြို့ဘူး ကိုယ်တစ်ဦးတည်းအတွက် ဖြစ်တည်လာတဲ့အရာမှ မဟုတ်ရင် ဘယ်အရာကိုမှ မတပ်မက်ဘူး ။ ကျွန်မ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေ ကိုယ်စွဲလမ်းတဲ့အရာတွေတောင် တစ်ဖက်နဲ့ ပြိုင်ပြီးလုရတာမျိုးဆိုရင် ကျွန်မ မလိုချင်လာတော့ဘူး ။ ကျွန်မ အတွက်သီးသန့်ဖြစ်တည်တဲ့အချစ်တွေကိုပဲ တပ်မက်ပါတယ် ။
ကျွန်မကို ကြင်နာချင်မှ ကြင်နာပါ ချစ်ချင်မှလဲ ချစ်ပါ ချစ်တာ မချစ်တာက တကယ်တော့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ချစ်ချင်ယောင်ဆောင်တာကျ တစ်ဖက်သားအပေါ် မညှာတာတဲ့ ကြီးလေး အပြစ်မျိုးပါ ကျွန်မ ခွင့်မလွှတ်ဘူး အပေါ်ယံသက်သက်ဆို ကျွန်မ မနှစ်မြို့ဘူး ။ အတင်းအကြပ်ကြီးလုပ်ယူပြီးမှ ကိုယ့်ဖက်က သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ကြခဲ့ပြီးမှ ဖြစ်တည်လာတဲ့အချစ်မျိုးတွေ ကျွန်မ မလိုချင်ဘူး သူ့အလိုလို ဖြစ်တည်လာတဲ့ အချစ်မျိုးတွေပဲ ကျွန်မ လိုချင်ပါတယ် ။
ကြၽန္မကို ၾကင္နာခ်င္မွ ၾကင္နာပါ သို႔ေသာ္ ၾကင္နာခ်င္ေယာင္ေတာ့မေဆာင္နဲ႔ အေပၚယံေတြကို ကြၽန္မ မုန္းတယ္ ။ ဟန္ေဆာင္ၿပီး အခ်စ္ခံရတာလဲ လူမွားၿပီး ဓားနဲ႔ထိုးခံရသလိုပဲ ေသတတ္တာမ်ိဳးပဲေလ အသက္ေတြ မေသေတာင္ ဘ၀ေတြ ေသခ်င္ ေသသြားတတ္တာမ်ိဳးေပါ့ ။
အရာရာကို စိတ္ႏွစ္ကိုယ္ႏွစ္ၿပီး ခံစားတတ္တဲ့ အားနည္းခ်က္ႀကီးက ျပင္မရတဲ့အထဲ လြယ္လြယ္ေလး ယုံၾကည္တတ္တဲ့ အက်င့္ေၾကာင့္လဲ ခက္ပါတယ္ ။ ကိုယ္နဲ႔လိုက္ႏႈိင္းၿပီး ကိုယ့္လိုပဲလို႔ ထင္တတ္တဲ့ အေတြးေတြ ခုထိ မေပ်ာက္ေသးတာလဲ ပါတယ္ေလ ။
အခုေခတ္က ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့စကားလုံးကို လမ္းႀကဳံေျပာသြားတဲ့လူေတြပဲ မ်ားတယ္ေလ ရရင္လဲ အျမတ္ေပါ့ မရျပန္ေတာ့လဲ အရႈံးမရွိပါဘူးေလ ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ရမလားဆိုၿပီး ေသြးတိုးစမ္းခ်င္ၾကတဲ့ လူေတြပဲ မ်ားပါတယ္ အစစ္အမွန္ဆိုတာ ထင္တာထက္ ပိုရွားလြန္းလာခဲ့သလို ေဘးနားမွာ အတုအေယာင္ေတြခ်ည္းပဲ ပိုေပါမ်ားလြန္းလာခဲ့တယ္ ။
သနားၿပီး ခ်စ္တာမ်ိဳး ကြၽန္မ မႏွစ္သက္ဘူး ကြၽန္မ မွာ ေျခႏွစ္ဖက္ လက္ႏွစ္ဖက္ အေကာင္းပတိအတိုင္းလဲ ရွိတယ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အိပ္မက္ေတြလဲ အျပည့္ရွိတယ္ ကြၽန္မဟာ အသနားခံ လူသားမဟုတ္သလို သနားစရာေကာင္းတဲ့ ေကာင္မေလးအျဖစ္ မ်က္လုံးျမင္ၿပီး ၾကင္နာသလိုလို သနားသလိုလို အၾကည့္မ်ိဳးေတြကို ကြၽန္မ ႐ြံလဲ ႐ြံတယ္ မုန္းလဲ မုန္းတယ္ သနားၿပီးမွ ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ မခ်စ္ပါနဲ႔
ၿပီးေတာ့ . . . ငါးမရ ေရခ်ိဳးျပန္တဲ့အခ်စ္မ်ိဳးေတြလဲ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူး ကိုယ္တစ္ဦးတည္းအတြက္ ျဖစ္တည္လာတဲ့အရာမွ မဟုတ္ရင္ ဘယ္အရာကိုမွ မတပ္မက္ဘူး ။ ကြၽန္မ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့အရာေတြ ကိုယ္စြဲလမ္းတဲ့အရာေတြေတာင္ တစ္ဖက္နဲ႔ ၿပိဳင္ၿပီးလုရတာမ်ိဳးဆိုရင္ ကြၽန္မ မလိုခ်င္လာေတာ့ဘူး ။ ကြၽန္မ အတြက္သီးသန္႔ျဖစ္တည္တဲ့အခ်စ္ေတြကိုပဲ တပ္မက္ပါတယ္ ။
ကြၽန္မကို ၾကင္နာခ်င္မွ ၾကင္နာပါ ခ်စ္ခ်င္မွလဲ ခ်စ္ပါ ခ်စ္တာ မခ်စ္တာက တကယ္ေတာ့ အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ ခ်စ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာက် တစ္ဖက္သားအေပၚ မညႇာတာတဲ့ ႀကီးေလး အျပစ္မ်ိဳးပါ ကြၽန္မ ခြင့္မလႊတ္ဘူး အေပၚယံသက္သက္ဆို ကြၽန္မ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူး ။ အတင္းအၾကပ္ႀကီးလုပ္ယူၿပီးမွ ကိုယ့္ဖက္က သည္းသည္းလႈပ္ ခ်စ္ၾကခဲ့ၿပီးမွ ျဖစ္တည္လာတဲ့အခ်စ္မ်ိဳးေတြ ကြၽန္မ မလိုခ်င္ဘူး သူ႔အလိုလို ျဖစ္တည္လာတဲ့ အခ်စ္မ်ိဳးေတြပဲ ကြၽန္မ လိုခ်င္ပါတယ္ ။